SAINT BERNARD DOG BREED PICTURES, PEJY 3 - ALIKA
Beatrice the Saint Bernard amin'ny faha-8 volana— 'Nahazo an'i Saint Bernard tany am-boalohany izahay nieritreritra fa ho ovy am-pandriana matetika izy saingy diso diso izahay. Kely ho an'ny taranany amin'ny 107 lbs. mihazakazaka miaraka amin'ny Labs SY Mpiandry Aostraliana ao amin'ny zaridaina alika . Raha tsy izany dia marina amin'ny taranany izy, miaro nefa sariaka, tia mandry eo an-tongotro sy mandoka ary mandroaka vola be loatra saingy tsy azoko an-tsaina ny fiainako raha tsy teo izy. '
Beatrice the Saint Bernard amin'ny faha-8 volana
Beatrice the Saint Bernard amin'ny faha-8 volana nilalao rano
Beatrice the Saint Bernard amin'ny 8 volana mipetaka amin'ny tompony
Beatrice the Saint Bernard amin'ny faha-8 taonany maka hatory amin'ny sofa
Pepper the Saint Bernard amin'ny faha-3 taonany— 'Ity tranonkala ity angamba no namonjy ny ain'ny alikako vaovao. Nahita doka tao amin'ny Craigslist ho an'i St. Bernard maimaim-poana aho ary namaly, ary niafara tamin'ny fitsidihan'ny alika. Raha tsy namaky ny tranonkalanao aho, dia mety ho fiovana lehibe ny fihetsiny (notaterin'ny tompona ary hitako rehefa nitsidika azy aho). Ary mieritreritra aho fa aorian'ny fanomezana an-tànana 1-2 dia mety ho tany amin'ny toeram-pialofana alika izy na tamin'ny tapakila tokana mankany amin'ny biraon'ny mpitsabo biby. Raha vantany vao nivoaka ny kamio aho dia nirohondrohona izy ary nanao famantarana mazava be fa 'azy' ireo olona ireo. Niditra tao an-trano izahay (izy no nitarika ny lalana) ary mety naharitra antsasak'adiny ny resaka nifanaovana tamin'ny tompona, izay nanaiky fa mahery setra ny alika ka hatramin'ny fananan'izy ireo vola faktiora ho an'ny mpifanila trano aminy ary nanaikitra ny iray tamin'ny izy ireo alohan'ny hanatonany ahy akory. Saingy, rehefa namaky ity tranokala ity aloha aho, dia nandray ny finoana ary nandray azy ihany, nilaza tamin'izy ireo fa hanome azy fitsarana iray herinandro aho. Nijanona teo amin'ny valan-javaboary iray teo akaiky teo aho mba hitondra azy ho any soso-kevitra 'mandeha lavitra' . Ny fifandraisanay matotra voalohany dia ny tsy fanekeny handao ilay kamio. Tsy naharitra izany, satria efa nahazatra ahy ny nanangona osy 150+ pounds teo ho eo. Ny maha alpha dia toerana iray efa zatra mameno ny OSY , Mila mianatra ny fomba miteny canine tsy kapitaly. Navelany ny kamio. Ela ny nisisika nefa nandao ilay kamio. Nandeha an-tongotra adiny iray angamba izahay talohan'ny nanombohany nilefitra tamin'ny fehy. Soa ihany fa tsy betsaka ny olona na ny alika eny an-dàlana mba hanasarotana ny resakay, satria avy be ny orana. Tonga tany an-trano izy dia nanandrana nitaraina tao amin'ny fianakaviako (izay najanoko haingana) ary nentiko ho an'ny voatondro 'walkabout' . Nanomboka teo dia nanao zavatra tsara lavitra izy. Mazava ho azy fa mbola manana fitondran-tena tsy tokony hianarana izy ary mbola eo am-pianarana ny 'canine' aho, saingy mieritreritra aho fa azo antoka ny milaza fa biby azo antoka sy sambatra izy izao. Izao dia mila mampiofana ny osy fotsiny aho fa voaro ity 'amboadia' ity. Izay zava-dehibe araka ny tadiaviko alika mpiambina biby fiompy any aoriana. Tiako ny misaotra anao amin'ny anaran'ny Pepper ary milaza amin'ny mpamaky anao fa eny, azonao atao izany ampiasao ity fomba ity , na dia tsy manana matihanina haneho anao ny fomba aza ianao. Mety io. Nampihatra izany koa aho talohan'ny nahazoako an'i Pepper tamina lehilahy matanjaka 10 taona Pitbull ary tena bitika aho. Nandeha an-tongotra izahay ary nanao kofehy i Pitbull. Nandritra ny resaka nifanaovanay momba ny lanezy miakatra sy midina amin'ny havoana mideza be dia be ny sain'i Pitbull teo anelanelan'ny dia. Ny alika hafa an'ny tompony (notanan'ny tompony) dia nanafika ny alikan'ny olona iray tamin'ny faran'ny fiakarana. Ilay notantaniko dia tsy niraharaha ireo alika hafa rehetra taorian'ny fanitsiana vitsivitsy ary maro izy ireo. :) '
'Ity no Saint Bernard malalako izay alika kely amin'ny 9 herinandro. Nahita mpiompy iray mivarotra zanak'alika St. Bernie aho tamin'ny volana desambra teo amin'ny $ 300 fotsiny, ary nanonofinofy ny hanana iray aho, noho izany dia nanao dia 3 ora aho ary nahita ny fitiavana teo am-pijerena voalohany rehefa nahita ny zanako kely. Ny mpiray trano amiko dia manana Mastiff anglisy antsoina hoe Lil, ka araka ny natiora dia niantso ny St. Bernard Biggie aho, ka manana an'i Big sy Lil izahay. '
Biggie, zanako any St. Bernard amin'ny 5 volana
'Biggie no zazakely mamy indrindra hitako. Malemy fanahy be izy ary kamo be. Tiany ny mandany ny androny mandry eo amin'ny gorodona mafy rehefa miala. Fa aza avela hadalana ny tenany matavy, rehefa maheno ny tadiny dia faly be izy ary fantany fa tonga ny fotoana an-tongotra. Miezaka mandeha an-tongotra lavitra isan'andro izahay mba hitazomana endrika. Tena nahalala fomba izy tamin'ny fatorany, mandeha eo anilako , tsy eo alohako. Malemy fanahy sy be fiahiana ny endriny, na dia miseho ho toy ny hoe mitady zavatra kely fotsiny aza izy. Toa manana fahatsapana fahenina momba ny fihetsem-pon'olombelona izy. Rehefa mahatsikaritra olona malahelo izy dia manintona eo amboniny ary mametraka ny lohany tena lehibe eo an-tratran'izy ireo. Na raha tezitra aho dia mirona mandry izy ary manandrana mikimpy avy eo. Mampiasa ny fitenenana hoe hobble aho, satria izany no fandehany ankehitriny. '
'Mbola tsy nihalehibe tao anaty paosiny lehibe kokoa noho ny fiainana izy, noho izany dia somary saro-kenatra izy. Toy ny ankamaroan'ny tena Saint Bernards dia tiany ny mampifaly. Mahalana izy no tsy mivovo na manjavozavo, fa niaro tena kosa indray mandeha rehefa nisy zanak'alika hafa nanandrana nanoroka azy. Ny quirk hitako fotsiny hoe manana St. Bernard dia ny drool! Biggie drool rehefa mafana be izy, na rehefa avy misotro rano. Tsy toetra manintona izy io, saingy nianatra nitazona lamba volom-bolo vitsivitsy manodidina ny trano izahay ary tsy dia ratsy loatra. Izy sy ny antsika Mastiff Milamina tokoa i Lil ary miaraka milalao tsara. '
Barney ilay alika kely Saint Bernard voafetra tamin'ny 12 herinandro
Barney ilay olo-masina fohy Saint Bernard tamin'izy 7 volana
Archie the St. Bernard amin'ny taona 3 amin'ny lanezy miaraka amin'ny barika amin'ny tendany
Archie the St. Bernard amin'ny faha-3 taonany - jereo ny nisafo drool avy amin'ny vavany.
Archie the St. Bernard amin'ny 6 1/2 taona miaraka amin'i Nick olombelona
Frex the St. Bernard puppy — Frex dia mijoro ho an'ny Freckles ary ny zava-misy fa ho lehibe tahaka ny T-Rex izy. Ity no fitsidihan'i Frex voalohany amin'ny mpitsabo biby. Enina herinandro ary matory mandritra izany rehetra izany.
Frex ny alikakely St. Bernard amin'ny torimaso 6 herinandro
'Frex dia nitombo zazavavy. Manakaiky ny 165 pounds izy, St. Bernard. Mahay araka izay azo atao izy, manokatra ny varavaran'ny trano fidiovana mihitsy aza izy ary mampirehitra fandroana mba hisotroany zava-pisotro mitovy habe amin'i St. Bernard. '
Shelby Dakota sy Gretchen
Fampahalalana Saint Bernard
Saint Bernard Sary 1
Saint Bernard sary 2
Saint Bernard sary 3
Alika Saint Bernard: sary an-tsokosoko voaangona
border collie pointer afangaro alika kely
irlandey wolfhound goavambe schnauzer mix
amerikana eskimo jack russell mix
kilalao mpiandry ondry aostraliana chihuahua mix